अफगानिस्तानमा तालिबानमाथि कसले गर्यो आक्रमण ? — Sanchar Kendra
अफगानिस्तानमा तालिबानमाथि कसले गर्यो आक्रमण ?
यसअघि आईएस–के समूहले गत महिना काबुल विमानस्थलमा आक्रमण गर्दा १३ अमेरिकी सेनासहित २ सय जनाको मृत्यु भएको थियो।आईएस–के समूहले अमेरिकी सेनाले देश छाडेका कारण मात्र तालिबान सत्तामा आउन सकेको आईएस–केको भनाइ थियो। शनिबारको आ’क्र’मणमा तालिबानका सदस्यमा भएको हताहतीको विषयमा केही खुलाइएको छैन। यस्तै आजै काबुलमा पनि एउटा वि’स्फो’टन भएको जनाइएको छ।
एक अफगान छात्राले अत्याचार भएको महसुस गरेको बताएकी छन्। उनले भनिन्, “सबै कुरा एकदमै अन्धकारमय देखिएको छ।” तालिबानले वाचा गरे पनि पछिल्लो कदमले अफगानिस्तान सन् १९९० को दशककै जस्ता कठोर शासनमा फर्किन लागेको सङ्केत दिएको छ। अर्को घटनाक्रममा शुक्रवार तालिबानले महिला मन्त्रालयलाई बन्द गरेको जस्तो देखिन्छ। तालिबानले त्यसको ठाउँमा कडा धार्मिक मान्यताहरू लागु गर्ने पुरानो निकाय स्थापना गरेको छ।
कतिपयले उक्त नयाँ नियमले महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने धारणा राखेका थिए किनभने विश्वविद्यालयहरूसँग अलग्गै कक्षा सञ्चालन गर्ने स्रोत छैन। माध्यमिक तहबाट छात्राहरूलाई अलग गर्नुको अर्थ कसैले पनि थप अध्ययन गर्न पाउनेछैनन्। सन् २००१ मा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएपछि अफगानिस्तानमा बालिका र महिला शिक्षा त्यसमा पनि भर्ना र साक्षरता दरमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको थियो।
प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालिकाको सङ्ख्या लगभग शून्यबाट २५ लाख पुगेको थियो भने महिला साक्षरता दर एक दशकमा झन्डै दुईगुनाले बढेर करिब ३० प्रतिशत पुगेको थियो। तर अधिकांश उपलब्धि सहरी क्षेत्रमा हासिल भएका थिए। सत्तामा नियन्त्रण जमाएपछि तालिबानहरूले अफगानिस्तानका महिलाहरूको अधिकार “इस्लामिक कानुनको परिधिभित्र रहेर” सम्मान गरिने बताएका थिए।